29 Jiona 2020 - FJKM Québec - Canada
29 Jiona 2020
28 juin 2020 by FJKM-QUEBEC
Miomana fa hiverina ny Tompo
LIOKA 21 : 34-36
21:34 Ary mitandrema, fandrao ny fonareo hovesaran’ny vokatry ny fisotroan-toaka sy ny fahamamoana ary ny fiahiahian’izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany.
21:35 Fa hihatra amin’izay rehetra mitoetra ety ambonin’ny tany rehetra izany.
21:36 Fa miambena ka mivavaha mandrakariva, mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan’ny Zanak’olona.
1-Tandremo ny fo (and34-35)
Mahagaga fa tsy ny voka-dratsin’ny toaka ny amin’ny taova hafa , toy ny vavony sy ny aty no ambaran’i Jesoa hotandreman’ny olona fa ny fony . Sao vesaran’ny vokatry ny fisotroana, satria ho avy amin’ny fotoana izay tsy ampoizina nyTompo. Mitondra ny olona ho amin’ny fahafinaretan’ny nofo ny fisotroana ka hanadinoan’ny olona ny fanahy , ary dia ho tampoka aminy ny fiavian’ny Tompo .
2-Tandremo ny amin’ny fiambenana
Izay mifanohitra amin’ny fo vesaran’ny filàna dia ny fiambenana sy ny vavaka mandrakariva.Tokony tsy ho tapaka ny fifandraisana amin’Andriamanitra mba hampitombo hery ny olona . Ny vavaka izay firesahana amin’Andriamanitra no fanatsarana izany . Izay tsara vavaka dia tsara fifandraisana amin’Andriamanitra ka tsy hanam-panenenana amin’ny hahatongavany .
Efa vonona hihaona amin’ny Tompo ve ianao ?
Copyright © 2020 FJKM Québec - Canada. Powered by churchthemes.com.